Tazo : hadika amin’ny tenim-paritra ny hafatra | NewsMada
Tazo : hadika amin’ny tenim-paritra ny hafatra
« Manomboka izao, hadika amin’ny fitenim-paritra rehetra ampiasaina eto amintsika ny hafatra fanentanana iadiana amin’ny aretina tazo, hipaka tsara any amin’ny vahoaka », hoy ny talen’ny ady amin’ny aretina tazo, Ratsimbasoa Arsène, omaly teny Antaninarenina. Hamafisina koa ny fiaraha-miasa amin’ny tangalamena sy ny sefo fokontany mpitarika handray sy hampihatra ny hafatra ny mponina. Farany, mila ampidirina lalina kokoa eny anivon’ny sekoly ny hafatra hoentiny any an-tokantrano. Hampidirina amin’ny paikady vaovao iadiana amin’ny aretina tazo ireo araka ny tapaka nandritra ny atrikasa teny Antaninarenina, izay nifarana omaly. Hatramin’izay, miantehitra amin’ny fitaovana sy ny fanafody isika amin’ny ady nefa zava-dehibe ny olona iantefany. Tokony hahaleo tena koa ny fanjakana malagasy manomboka izao amin’ny fividianana ny fitaovana sy ny fanafody fa tsy hiantehitra amin’ny mpanohana ara-bola hatrany. Betsaka ny orinasa eto afaka mandray anjara amin’ny ady amin’ny tazo mba haharitra ny asa. Manohana betsaka antsika amin’ny ady ny USAID amin’ny alalan’ny tetikasan’ny filoham-pirenena amerikanina (PMI).
Tamin’ny taon-dasa, nanomboka ny volana janoary ka hatramin’ny mey, 781 ny olona maty vokatry ny tazo, nidina ho 21 izany ny volana novambra 2014 ka hatramin’ny janoary 2015 lasa teo. « Tanjona ny hampidina ny tahan’ny olona maty ary ho foana miandalana ny aretina rehefa voafehy io taha io », hoy ny fanazavany ihany.
Matoa tsy tratra ny tanjona, tsy ampiasain’ny olona amin’ny tokony no izy ireo fitaovana nomena azy. Maimaimpoana ny fitsaboana ny aretina eny amin’ny CSB rehetra. Misy ny fizarana lay misy fanafody 11 tapitrisa ny taon-dasa miampy ny fandrarahana fanafody ny trano fonenana.